Shirka London waxaa lagusoo dhisi doonaa nidaam u eg Paul Bremer-kii Ciraaq, Socdaalka William hague ee Muqdisho (Warbixin). | Building Momentum
Shirka London waxaa lagusoo dhisi doonaa nidaam u eg Paul Bremer-kii Ciraaq, Socdaalka William hague ee Muqdisho (Warbixin).
Dalka Soomaaliya ayaa lafilayaa sanadkan gudihiisa in uu galo marxalado cusub oo ka duwan marxaladihii hore, tan iyo markii ay soo bilaabatay xamladda saliibiga caalamka ka socota taxadigii ugu weynaa ayay wajahayaan dowladaha reer galbeedka marka loo eego loolanka caalamka islaamka ka socda.
Kobaca Islaamka ayaa ku xoogeystay Bariga Afrika waxaana soo muuqday madaahir Islaami ah oo muddo Boqol sano kabadan caalamka Islaamka ka maqan.
Dalkeena Muslimka Soomaaliya sanadii 2009-ka waxaa ka bilowday in lasoo nooleeyo dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka ahna midka ay necebyihiin gaaladu.
In Xad kamida Xuduuda Alle laga fuliyo magaalooyin waaweyn ee qaarada Afrika kamid ah islamarkaana Nidaamka Zakada lasoo nooleeyo waxay sharaf weyn u tahay muslimiinta Soomaaliya waana Injaazaad ay gaareen muslimiinta.
Arrinkaasi wuxuu ka xanaajiyay wadamada reer galbeedka oo aad udhibsaday kobaca Islaamka nool ee wax iska celin kara islamarkaana taxaddi u keeni kara dhaqamadooda.
Fariidada Jihaadka ayaa ka bulaashay Soomaaliya heer wilaayaadka dhaca Koonfurta Soomaaliya shacabka ku dhaqan ay mujaahidiinta gacanta ugeliyaan Maal iyo wiilal dagaalka ka qeyb qaato.
Dadka Soomaalida waxay gaareen heer ay isku filnaadaan oo ay ka maarmaan gacan hoorsiga hay’adaha reer galbeedka arrimahaasi oo dhan waxay ka gadmi waayeen cadawga diinta islaamka.
Horraantii sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa lasoo cusboonaysiiyay duulaankii Soomaaliya ku socday waxaana dagaalka soo galay dowladaha Kenya iyo kuwakale waxaana horay dagaalka ugu jiray Itoobiya Burundi, Uganda iyo Jabuuti oo iyana gadaal kasoo raacday.
Arrinta cusub ayaa ah in dowladda Ingiriiska oo kamid ah quwadaha reer galbeedka ay markii ugu horeysay bilowday in ay faragelin dhan walba ah kusoo sameyso Soomaaliya.
Lixyameedyadii ayay Soomaalidu ka xorowday gumeysigii tooska ahaa ee UK balse markii dowladii Siyaad Barre dhacday ayay Ingiriisku si dadban usoo celiyeen gumeysigii ay ku hayeen waqooyi galbeed Soomaaliya oo maanta loo yaqaan Somaliland.
William hague oo Muqdisho ku sugan.
Dhaqanka Ingiriiska ayaa weli ku dhax daadsan bulshada waqooyi galbeed Soomaaliya waxaana bulshada saameyn ku dhax leh NGO-yo Ingiriisku maalgeliyo xataa wuxuu saameyn ku leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada arrinkaasi oo muujinaya in Ingiriisku udub dhaxaad u yahay dhibaatada ka dhanka ah muslimiinta Somaliya.
Maanta oo Khamiis ah ayaa waxaa Muqdisho soo gaaray William hague oo ah Wasiirka arrimaha Dibadda Ingiriiska siyaasad ahaan waa Mustawe sare oo reer galbeed ah oo Somaaliya soo gaaray.
William hague wuxuu hordhac u yahay shirka dhawaan ka furmi doona magaalada London ee wadanka Ingiriiska kaasi oo lagu go’aamin doono mustaqbalka DKMG ah.
Shirka London Waxaa lagusoo dhisi doonaa Nidaam u Eg Paul Bremer-kii Ciraaq.
Bishii April 9, 2003 ayay ciidanka Mareykanka qabsadeen magaalada Baqdaad ee xarunta wadanka Ciraaq sidaasi ayayna Ciraaq ku gashay marxalad Ixtilaal ah.
G.W.Bush madaxweynihii Mareykanka ee xiligaas ayaa duulaanka Ciraaq u sameystay Boor uu ku sasabanayay kaasi oo ahaa “Baahinta Dimuquraadiyad iyo rididda Halista amniga Bariga dhexe oo Sadaam loola jeeday”.
Sida caadada ah gumeystuhu wuxuu ku fashilmaa marka uu ka leexdu waxyaabaha halku dhigga u ah ee uu khaldo dadka uu gumeysto, Mareykankii wadamada carabta ka dhaadhiciyay in ujeedkiisu yahay rididda Sadaam ayaa isbalaariyay waxayna bilaabeen in ay boobaab hantida reer Ciraaq.
Taariikhu markii ay aheyd 8, May 2003 ayuu wareegto soo saaray G.W.Bush wuxuuna ku magacaabay maamul Madani ah oo uu madax ka yahay General Mareykan ah oo Paul Bremer lagu magacaabo.
Maamulka waxaa loogu magac daray Maamulka Madaniga Ciraaq arrinkaasi wuxuu muujiyay in duulaanka Mareykanka ee Ciraaq uu yahay mid gumeysi oo dalka lagu qabsaday.
Saxaafadda reer galbeedka ayaa isku dayday in ay shaati wanaagsan ugeliso maamulka Paul Bremer iyadoo ugu yeeraysay shirkadda latalinta dhibaatooyinka شركة استشارية للأزمات Consulting firm to crises.
Soomaaliya ayaa lafilayaa in sidaasi si lamid ah lageliyo waxaana ladiyaariyay siyaasiyiin bedeli doonta Shariif iyo Ina Gaas, Alle masuurta geliyee cadawga Kenya iyo Itoobiya ayaa heegan lageliyay waxaana ladoonayaan in gobolada dalka ay xoog ku qabsadaan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa saadaalinaya in nidaam u eg kii Paul Bremer laga dhisi doono Somaaliya, taasi waa qorshaha ay diyaariyeen Beni’aadan Allihii Abuuray ku kufriyay laakin waxaa ka weyn oo ka qaalib noqan doona qorshaha Allaah Subxaanahu watacaalaa waxaana rejeynaynaa in dhagarta cadawgaasi Alle naga badbaadiyo.
Source : somalimemo